Izindaba - Umsebenzi wokuvikela nokulawula ubhubhane awunakudedelwa umzuzwana！
Ukuthuthuka kwalolu bhubhane kubhekene nengozi yokuthi “kuhlangane futhi kube namandla amathathu”
Kusukela ekuqaleni kobusika, ukuthuthukiswa kwesifo esiwubhadane kubhekane nengozi yokuthi “kuhlanganiswe kathathu futhi kubekwe phezulu”, isimo sokuvimbela nokulawula sesibe nzima kakhulu futhi siyinkimbinkimbi, futhi imisebenzi inzima futhi inzima.
Ubhadane lomhlaba wonke luveza ubungozi "boshintsho olwenzeka kancane kancane" kanye "nokuguquka kwezakhi zofuzo". Imvelo yemvelo ebusika isibe uchungechunge lwamakhaza emvelo. I-coronavirus entsha inesikhathi eside sokusinda, umsebenzi wegciwane onamandla, kanye nobungozi obukhulu bokudlulisa obunamandla. Ngaphezu kwalokho, ukuguquka kwegciwane kukhulise ukungatholakali nokufihla, okuholele ekugqashukeni okugcwele kwegagasi lesithathu lomqedazwe emhlabeni jikelele. Kusukela ngoDisemba 2020, kube namacala amasha aqinisekisiwe angaphezu kwama-600,000 emhlabeni jikelele, nokufa okusha okungaphezulu kuka-10,000, womabili lawa aphezulu kakhulu selokhu kwaqubuka.
Ubhadane lwasekhaya lubeka engcupheni yezifo ezihlangana futhi eziphakanyiswe kakhulu ngezikhathi ezithile nezihlangene endaweni. Kusukela ngoDisemba 2020, izifundazwe ezingama-20 zibike amacala amasha aqinisekisiwe angenisiwe kanye nezifo ezingabonakali. Kusukela ngo-24: 00 ngoJanuwari 7, 2021, izwe lami lisanda kuqinisekisa amacala endawo angama-280, lawo ayi-159 asanda kufakwa esontweni eledlule. Amacala, ikakhulukazi ukuqubuka kwakamuva eShijiazhuang City, esifundazweni saseHebei. Ukuvela kwalezi zimo kukhumbuza isifundazwe sethu ngomsebenzi wokunqanda nokulawula ubhubhane futhi akukwazi ukuphumula.
Isimo sokunqanda nokulawula ubhadane siveza ubungozi bokuhlangana kwabantu, ukuthuthwa kwempahla nezimoto. Isifundazwe sethu yisifundazwe esinabantu abaningi abaphuma ngaphandle. Inani labasebenzi bokufika kanye nabafundi basekolishi baba phakathi kwabahlanu abahamba phambili ezweni, futhi iningi labo ligobhozela eChangzhumin engomakhelwane nakwezinye izindawo eziyinhloko zokuvimbela nokulawula ubhubhane. UMkhosi Wentwasahlobo ususondele, futhi abafundi bazoba namaholide kanye nabokufika. Ngokubuya kosomabhizinisi, nesikhathi esiphakeme sokuhamba kwabantu abavela kwezinye izindawo eJiangxi, izingcuphe ezahlukahlukene kanye nezici ezingaqinisekile njengokuhamba kwabantu, imibuthano nohambo kuhlangene futhi kubekwa phezulu, okungaholela kalula ekusakazekeni virus ngisho neqoqo lezifo eziwubhadane.
Qedela ukugoma inani labantu abalulekile ngaphambi koMkhosi Wentwasahlobo
Ubusika nentwasahlobo yisikhathi esibucayi ekuvimbeleni nasekulawuleni ubhadane lwezifo. Isifundazwe sethu sisebenzisa izindlela ezahlukahlukene “zokungenisa ukuzivikela kwangaphandle, ukuzivikela kwangaphakathi”, futhi ngokuqapha, njengoba kwaqala, sibamba ukujwayelekile kanye nokunqanda nokulawula ubhubhane, futhi siyaqhubeka nokuhlanganisa ubhadane olutholwe kanzima lokuvikela nokulawula imiphumela.
Sebenzisa ngokucophelela ukuvimbela nokulawulwa kwezifo eziwubusika nobusika. Kusukela kuqale ubusika, isifundazwe sethu sesibambe imihlangano ekhethekile eminingana ngenhloso yokuhlola nokutshala ukuvinjelwa nokulawulwa kobhubhane lwasebusika nolwentwasahlobo, ukuxhumanisa nokuxazulula izingqinamba ezinkulu, nokukhuthaza izikhungo zemiyalo zesifundazwe kuwo wonke amazinga ukuba zingene ngokushesha esikhathini sempi. Kusukela ngoZibandlela wezi-2020, isifundazwe sethu sesikhiphe ngokulandelana izinhlelo ezingama-30 ezibandakanya ukuvimbela nokulawula ubhadane lwasebusika nentwasahlobo, ukugoma, ukuhlolwa kwe-nucleic acid nokwakhiwa komtholampilo womkhuhlane, imithombo yolondolozo lwezokwelashwa, ukuzivivinya okuphuthumayo, nokuqiniswa kokuvinjelwa nokulawulwa komqedazwe ngoSuku Lonyaka Omusha noMkhosi Wentwasahlobo. Uhlelo luwukulwa ngokuqinile nangokuqinile ukuvimbela nokulawula ebusika nasentwasahlobo. Ngesikhathi soSuku lukaNcibijane, isifundazwe sethu sithumele amathimba ayi-11 abhekele izindawo ezahlukahlukene zesifundazwe ukuyovakashela ngokukhululekile nangamazisi ukuqeda ngokuqinile izingozi ezahlukahlukene ezifihliwe zokuvimbela nokulawula ubhubhane.
Ngokuhambisana ngokuqinile nenqubo ehlanganyelwe yokuvikela nokulawula yoMkhandlu Wombuso ekusetshenzisweni okuhlangene kokugoma okusha kwe-coronavirus kubantu ababalulekile, isifundazwe sethu senze amapulani omsebenzi noma amacebo okugoma, ukuqapha okungajwayelekile, ukwelashwa kanye nokunxeshezelwa ngokuthinteka okungajwayelekile, ukucacisa imikhakha emibili Gxila kubantu abagonyiwe. Isigaba sokuqala ngabantu abasengozini enkulu yokutheleleka nge-pneumonia yomqhele omusha, kufaka phakathi abantu abanobungozi obuphezulu bokuchayeka emsebenzini, njengokuhlolwa kwempahla ethekwini phambili kanye nabasebenzi abahlukanisiwe ababandakanyeka ezintweni ezibandayo ezingeniswayo, ukulayishwa kwetheku nokuthula, ukuphatha, ukuthutha nokunye abasebenzi abahlobene, abasebenzi bezokuthutha bamazwe ngamazwe nabasekhaya Abasebenzi, abasebenzi basemachwebeni asemngceleni, abasebenzi bezokwelapha nabezempilo ababhekene nengozi enkulu yezifo eziwumshayabhuqe zaphesheya kwezilwandle; abantu abasengozini yokutheleleka phesheya, njengalabo abaya phesheya ngokuya emsebenzini noma ukufundela ibhizinisi noma izinhloso ezizimele. Isigaba sesibili ngabasebenzi abasezikhundleni ezibalulekile eziqinisekisa ukusebenza okuyisisekelo komphakathi, kufaka phakathi izisebenzi eziqinisekisa ukuhleleka komphakathi, njengokuphepha komphakathi, ukucisha umlilo, abasebenzi bomphakathi, kanye nabasebenzi abahlobene nabo ezinhlanganweni zikahulumeni nasezikhungweni ezihlinzeka ngqo izinsizakalo emphakathini; labo abagcina imisebenzi ejwayelekile yokukhiqiza neyokuphila yomphakathi Wezisebenzi, njengamanzi, ugesi, ukushisa, amalahle, abasebenzi abahlobene negesi, njll .; abasebenzi bezenhlalakahle, njengokuthuthwa kwempahla, ukuhanjiswa kwempahla, ukunakekelwa kwabantu abadala, ukuthuthwa kwendle, umngcwabo kanye nabasebenzi abahlobene nezokuxhumana. Isifundazwe sinophenyo olunzulu ngesibalo sabantu abadinga ukugonywa kulo mzuliswano wabantu ababalelwa ku-1.6 million. Lo mjikelezo womsebenzi wokugoma esifundazweni wethulwa ngokusemthethweni ngoDisemba 28, 2020. Njengamanje, bangu-381,400 abantu abagonyiwe. Ukugonywa kwabantu abasemqoka kuzophothulwa ngaphambi koMkhosi Wentwasahlobo.
Sekubunjwe amaqembu weselula aphuthumayo angama-6 ezingeni le-nucleic acid
Kulezi zinsuku, kunemitholampilo engama-223 yemfiva edlulise ukuhlolwa esifundazweni, kanti izinga lokuphothula ukwakhiwa lingu-99.5%. Phakathi kwazo, isilinganiso sokwamukelwa kwemitholampilo yemfiva ezibhedlela ezijwayelekile zemfundo ephakeme kanye nasezibhedlela zezifo ezithathelwanayo singu-100%. Umthamo wokuhlolwa kwe-nucleic acid nsuku zonke ukhuphuke waya ku-338,000, kwathi amaqembu ayisishiyagalombili okuhlola izinga le-nucleic acid ahlola isifundazwe kanye nethimba elilodwa lokulawula ikhwalithi.
Ngaphezu kwalokho, isifundazwe sethu sizokwenza konke okusemandleni ukwenza umsebenzi omuhle ekusampuleni nasekuhloleni i-coronavirus nucleic acid entsha yokudla okubandayo okuthengwa ngaphandle, ukuze kuhlolwe yonke inqwaba nazo zonke izingcezu. Qhubeka nokusebenzisa ulwazi oluyigugu nolusebenzayo olutholwe ekuqaleni kwesigaba, qhubeka nokwenza ngcono indlela ejwayelekile, uqhubeke nokuqinisa "imvelo yomuntu" nokuvimbela, uqhubeke nokuqinisa ukuvimbela iqembu nokulawulwa kweqembu, uqhubeke nokuqinisa isisekelo sokuvimbela nokulawula, futhi wenze yonke imizamo ukuvimbela nokulawula ubhubhane lwasebusika nolwentwasahlobo.